Fashion Archives - Sa Ka War
“ပုဂံမြေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အငွေ့အသက် အပြည့်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အေးသောင်းရဲ့ ၀တ်စုံလေး”
[Zawgyi] ပုဂံပြည်ကြီးဟာ မြန်မာတို့ရဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုလုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုဂံပြည်မှာ ဘုရားပေါင်း (၁၀၀၀)ကျော်နဲ့ မြန်မာအမွေအနှစ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတာကြောင့်ပါ။ ပုဂံကချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့လည်း ပြောရမှာပါနော်။ UNESCO မှပုဂံ ကိုကမ္ဘာရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် အသိမှတ်ပြုလက်ခံတဲ့နေ ပွဲ့မှာ မအေးသောင်းကတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ၀တ်စုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ တခြားနိုင်ငံတွေကလဲ စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ်စုံလေးကိုတော့ ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးက ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ …
ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ ဆက်ဆီမော်ဒယ် တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇာဇာထက်ကိုတော့ တော်တော်များများသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဝတ်ပုံစားပုံတွေကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေများစွာ ရှိသော်လည်း အားပေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဇာဇာထက်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ အရင်က ယောကျာ်းစိတ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့် ရင်သားမှာ ဆီလီကွန်ထည့်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ လက်ရှိမှာတော့ သူ့ကိုယ်သူ ကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောကြားသွား ခဲ့ပါတယ်။ ဇာဇာထက်ကတော့ Sunday နဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ …
Entertainment / Fashion / သုတ ရသစုံ / အနုပညာ
May 16, 2019 May 24, 2019 - by admin - LeaveaComment
မန်မာဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာဇာတ်ပို့အနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာဗီဒီယိုဈေးကွက်ယိုယွင်းလာမှုဒဏ်တွေကိုခံနေရတဲ့သူတွေထဲကတ စ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်တစ်ယောက်ကိုတော့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။သူကနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူကြုံတွေနေရတဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုအခြေအနေေ တွကိုပြောပြသွားပါတယ်။သူပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောချင်လွန်းလို့မိတ်ဆွေတွေကို သိအောင်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လတ်တလေ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို“ဘာမှမရှိပါဘူး။မနေ့ကမှကျိုက်ထိုကဖျော်ဖြေပြီးပြန်လာတာပါ။ကျိုက်ထိုရိုးရိုးလေး ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ရဟန်းခံရှင်ပြု ပွဲပေ့ါနော် ကိုကြီးခင်လှိုင်တို့အဖွဲ့နဲ့ အိမ့်ချစ်တို့ကိုဟဲလေးတို့နဲ့ချစ်ငယ်တို့နဲ့သီချင်းဆိုပြီးတော့ ပြန်လာတာပါ။”လို့ပြောပြသွားတဲ့အပြင်ဗီဒီယိုဈေးကွက်ပျက်သွား တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်း “အနည်းငယ်အခက်အခဲမဟုတ်ဘူး။ အရမ်းကြီးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာသိသလောက်တော့။ဒါပေမဲ့တချို့စက်အဖွဲ့တွေ ကျတော့လည်းမြင်ခဲ့တာဇာတ်လမ်းတွဲတွေဘာတွေမှာပြန်လုပ်နေတယ်။ သူတို့ကိုတွေ့လိုက်တော့စိတ်အေးသွားတယ်ပေါ။တချို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရန်တွေ၊လူကြမ်းတွေအရမ်းကိုတိုင်တွေပတ်နြေ ကတယ်။ဘာအလုပ်မှာလဲမရှိကြဘူး ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းကြားတယ်။ သမီးကိုယ်တိုင်လည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်။ ကလေးကျောင်းစရိတ်တွေနဲ့တလတလ ပေါအဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်လခတွေနဲ့ ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ သမီးတို့စိတ်ထဲမှာသမီးတို့လော ကကြီးအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သမီးတို့မထင်ထားဘူးပေါ့။သမီးကိုပြောတယ်။နင်တို့ဘာလို့ …
A new teaser for the new season of The Walking Dead has been unveiled at the 2018 San Diego Comic-Con. We’re expectingalonger trailer later today, but this was unveiled in …
Since the first big screen appearance of the bear of little brain in Winnie The Pooh And The Honey Tree back in 1966, the residents of Hundred Acre Wood have …
Fans finally gotaglimpse of Priyanka Chopra’s engagement ring and we need to thank Raveena Tandon for it. Priyanka attended designer Manish Malhotra’s party and photos from the do …